Sidee ku ogaan kartaa gabarta aad guursan rabto in ay tahay mid ku wanagsan Dhanka Bashaalka iyo Wasmada. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Sidee ku ogaan kartaa gabarta aad guursan rabto in ay tahay mid ku wanagsan Dhanka Bashaalka iyo Wasmada.
Sidee ku ogaan kartaa gabarta aad guursan rabto in ay tahay mid ku wanagsan Dhanka Bashaalka iyo Wasmada.
Bulsha:- Markii hadii aad tahay qof guurdoon ama rab in uu dhawaan guursato gabar waxaa laga rbaaa in aad wax badan sii ogaato si aadan ugu dhicin qalad ad si kartay inta aadan soo guursan ka hor waayo guurka waa cajiib waayo hadii guurka kugu horeyay uu ka xumaado taas waa niyada jab iyo calool xumo.
Raga dumarka guursada waxaa ay jecelyihiin ay markasta helaan dumarka ku wanasgan dhanaka wasmada iyo raaxada hadii aad hesho qof aan aqoon sida loogu raaxeyo ninkeeda taas waa qasaaro adaana isku keenay.
FG: Inta aadan soo guursan ka hore qofta aad rabto waa in aad marka hore tijaaboyinka badan aad ku sameyso waliba dhanka bashaalka.
Qofta oga shekeyn sheekooyin ku saabsan dhanka galmood hadii ay shekooyinkas kula jiibido taas waa reer magaal ee ka sii deyn.
Hadii ay suura gal uu tahay qofta si maldahan u bar oo aan lagu fameyn waliba mar marka qaar ku dar gacan ka hadal samey.